Tolotra tsara indrindra an'i Anker ho an'ny Amazon Prime Day | Vaovao IPhone
Ny 21 sy 22 jona dia atao ny Andro Prime Amazon, miaraka amin'ny tolotra tsara avy amin'ny goavambe fivarotana an-tserasera izay ahafahantsika mahazo vokatra amin'ny vidiny mirary, toy ity safidin'i Anker izay asehonay anao eto ambany ity.
3 Fakan-tsary fanaraha-maso anaty trano Eufy 2K
4 Nano Charger ho an'ny iPhone 20W
Ireo headphones ireo dia iray amin'ireo safidy tsara indrindra amin'ny AirPods an'ny Apple. Miaraka amin'ny rafitra fanafoanana ny tabataba, ny fahaleovan-tena mahafinaritra, tranga tsy misy tariby ary ny fahaizana manamboatra ny fampitoviana, ity dia iray amin'ireo headphones True Wireless tsara indrindra izay nosedraina tamin'ny vidiny. Ankehitriny dia azonao atao ny manome azy ireo mora kokoa, amin'ny € 89,99 (Fihenam-bidy 40 €) amin'ny Amazon (rohy).
Iray amin'ireo mpamadika finday tsara indrindra eny an-tsena, ahafahanao mankafy ny atiny multimedia ankafizinao na aiza na aiza noho ny mpandahateny sy ny bateria tafiditra ao aminy, miaraka amin'ny rafitra Android napetraka noho ny ahafahanao misintona rindranasa streaming izay irinao. Ankehitriny dia azonao atao izany amin'ny fihenam-bidy 100 €, izay mamela ny vidiny farany amin'ny € 499 (rohy).
Fakan-tsary fanaraha-maso anaty trano Eufy 2K
Fakantsary fanaraha-maso misy kalitaon'ny sary tsara, famahana ny 2K, fahitana amin'ny alina, feo mandeha roa ary mifanaraka amin'ny HomeKit Secure Video. Tonga lafatra amin'ny famoronana tambajotra fanaraha-maso horonantsary ao an-trano, ary azonao atao izao ny mahazo ny € 33,99 amin'ny Amazon (rohy).
Nano Charger ho an'ny iPhone 20W
Charger kely ho an'ny iPhone, fa aza diso satria Izy io dia manana herin'ny 20W, noho izany dia tsy hifanaraka amin'ny fiampangana haingana ny iPhone-nao fotsiny, fa azonao atao aza ny mampiasa azy io hikajiana ny iPad Pro. Ankehitriny dia azonao atao amin'ny € 13,99 amin'ny Amazon (rohy)
Ny konferansa horonantsary dia mijanona eto, koa raha mbola tsy manana webcam mendrika ianao dia izao no fotoana ahazoanao iray amin'ireo tsara indrindra amin'ny sokajiny. Miaraka amin'ny vahaolana 1080p 60fps, HDR, ary ireo fiasa mandroso toy ny autofocus sy ny autofocus, ity webcam Anker ity izao dia vidiny eo amin'ny € 89,99 amin'ny Amazon (rohy)
Ary avelanay ho an'ny farany ianao mpanadio banga robot ahafahanao mankafy fotoana malalaka bebe kokoa noho io rafitra fanadiovana manan-tsaina izay mamafa sy manosotra amin'ny fotoana iray. Izy io koa dia mifanaraka amin'ny Alexa sy Google Assistant ary misy vidiny € 179,99 amin'ny Amazon (rohy).
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPhone » maro » Ny Anker tsara indrindra manolotra ho an'ny Amazon Prime Day
Ny vondrona LGBTQ dia manameloka ny fitsaboana tsy mitovy amin'ny App Store manerantany